Wide Color DCI-P3 Format နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကူးနိုင်တော့မယ့် Google Pixel 4
26 Jun 2019 . 12:27 PM
Google Pixel Series စမတ်ဖုန်းတွေက အခုအချိန်မှာ Camera ပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးဖုန်းတွေအနေနဲ့ နာမည်ရရှိထားတာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း တခြားသော စမတ်ဖုန်းတွေက Dual Camera နဲ့ Triple Camera သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Single Camera ကိုပဲ သုံးပြီး အကောင်းဆုံးနေရာကို ရယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ Google ကိုယ်တိုင်ကနေ Pixel4စမတ်ဖုန်းရဲ့ နောက်ကျောဘက်ဒီဇိုင်းကို ထုတ်ပြခဲ့ပြီး ဒီတစ်ကြိမ်မှာ Pixel4စမတ်ဖုန်းမှာ အနည်းဆုံးသော Camera ၂ လုံးပါဝင်လာမှာကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလည်း Pixel Series ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ Google ကနေ Pixel4ဖုန်းမှာပါဝင်လာမယ့် Camera Feature အသစ်ကို XDA Developer ကနေ ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပုံမှန် Android ဖုန်း Camera တွေက ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ sRGB Color တွေအစား ပိုပြီး Color ပိုပြီး စိုပြီး Color Range ပိုများတဲ့ Wide Color DCI-P3 ကို Support ပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Color ပုံစံကွဲသွားတာလို့ပဲ ပြောလို့ရပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ သိသိသာသာကို Pixel4ရဲ့ Camera Performance က ပိုကောင်းလာမှာပါ။
ဒီ DCI-P3 Color နဲ့ ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင် ပုံမှန် sRGB Color တွေထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးကောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး Wide Color Format နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်တာက Android ဖုန်းတွေထဲမှာ Pixel4က ပထမဆုံးဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း အလားတူ DCI-P3 Color နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးဖို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ iPhone7မှာထဲက Apple က အသုံးပြုလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ဒါကြောင့်လည်း Apple iPhone ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက ပို Flat ဖြစ်ပြီး Edit လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Color တွေပိုလှနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
XDA ရဲ့ ပြောကြားချက်အရလည်း Google က ဒီ DCI-P3 Color Mode ကို Pixel3ဖုန်းမှာလည်း ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပေမယ့် Activate မလုပ်ထားခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီသတင်းက Google Pixel4စမတ်ဖုန်းက ယခင်ထက်တောင် ပိုပြီး Camera ပိုင်းကို အားစိုက်လာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Ref : XDA Developer
by Zawyè . 52 mins ago